Ekhulwini IV, phakathi nokubusa koMbusi uConstantine Omkhulu, eMbusweni omkhulu wamaRoma umbuso nokubusa uthi, funa ukukhanya zobuKristu, waba isikhulu soMbuso inkolo. Kodwa ukunqoba ukukhukhuleka okholweni lweqiniso kwandulelwe ukugunyazwa okwenziwe umgwaqo eside futhi kanzima, wathela ukholo igazi owadela ukuphila kwabo kuwo ngokuya. Omunye wabo kwakungu-ukholo ongcwele Eugene, okuyinto uya indaba yethu.
UMbusi - Umshushisi onesihluku ukholo lobuKristu
Ekuqaleni kwekhulu IV eMpumalanga obusa umbusi yobuqaba uDiocletian, wehlela emlandweni njengoba omunye abashushisi ngesihluku kakhulu futhi intransigent lamaKristu. umsekeli okweqile ngokususa ukukhulekelwa kwezithombe, wenza konke okusemandleni akhe ukuze avuse singafi ngesikhathi zobuqaba. Omunye izigaba ngomzabalazo wayo ne ukholo lweqiniso Ayeyisinqumo esikhishwe kuye ngonyaka 302.
Ngesisekelo le dokhumenti abangamhloniphi uNkulunkulu zonke izinduna zomuzi baphoqeleka ukuba abhubhise obuKristu ezindaweni ezithoba kubo futhi labo ababenqaba ukuba bakhonze izithixo kwakumelwe bancishwa wonke amalungelo nokulwa. Abaningi ababa yizisulu kuleso uMbusi ababi yehle emlandweni ngokuthi iSonto Lobu-Orthodox yabangcwele baba abafel 'ukholo ukuchitha igazi lwawo ngoKristu.
Kokuqina imithetho ngowezizwe
Nokho, ukushintsha inkambo yomlando kwakungenakwenzeka, futhi ngokushesha uDiocletian babeqiniseka ngobuze imizamo yabo. Zibancishe emathempelini awo nasema-izinsongo ustrashonnye enkantolo, labo abanamathela okholweni olusha babekhuphukela imithandazo ngokuhlanganyela nokukhulekela emihumeni, lezixuku kude nezinye ukuba sezindaweni ezisithekile. Khona-ke kulandelwa, nomthetho omusha ngisho anonya nakakhulu. Yena enjoined ukusebenzisa zonke izinyathelo ukukuphoqa ukuba amaKristu ukuba zobuqaba, kanye abangalaleli akhaphele kabuhlungu.
Abangane empilweni nabafowethu Kristu
Kuyinto kule minyaka nzima ngamaKristu bamdumisa uNkulunkulu feat yakhe umfel 'ukholo Eugene. ONgcwele Satalione wayehlala emzini futhi waba umngane oseduze we induna City amabutho, ogama lakhe lalingu-Evstratov. Bobabili kuzalwa edolobheni Aravrakina, ingeyamakhosi amaKristu ngasese umbusi ophakeme nengxenye izinkonzo futhi ukugcwaliseka kwazo zonke imicikilisho yobuKristu. Kusukela ngaleso sikhathi, njengalokho sasikhona esimemezelweni zokugcina kombusi, ukuphila kwabo njalo usengozini, kulapho ukuze, phakathi inombolo enkulu izakhamizi amnyama neyokungazi ulwa uKristu ngokholo ahlangane ukwesekwa kanye nokwamukelwa.
I lokuboshwa yompristi Armenia
Kwenzeka isimanga ukuthi maduze elathunjwa bayiswa umdala Satalion Armenia Isonto Auxentios ekugcineni futhi kugujwa ubuso abangcwele. Wangena izandla oyiqaba ngendlela enesihluku futhi okweqile - umbusi Lisiya. Lesi kwakuyisikhathi sokuba ozizondayo oshisekayo amaKristu, futhi umculi izimpumputhe intando yasebukhosini. Akekho kwakungasekho ukungabaza ukuthi isiphetho presbyter Armenia uphawu.
Icala okuseduze yisikhonzi ibandla likaNkulunkulu wavele wabona ukuthi Yevstratii nomngane wakhe u-Eugene. Auxentios oNgcwele ukuba emgodini, aluzange luphele ukuthandaza ngoba bonke ababamba ndawonye naye kwaba ukuthatha igama leNkosi ukholo. Laba bangane ababili, waphuthuma kuye futhi bamncenga ukuba ukhumbule emithandazweni yakho, futhi amagama abo kuSomandla ukubathumela abantu elula futhi ethobekile, amandla ukuba akhazimulise igama laKhe ngokufa kwakhe.
Nomthandazo ebumnyameni isiboshwa
Ebumnyameni itshe emhumeni, phakathi ukububula iziboshwa kanye clanking ngamaketanga, wanyukela ezulwini, amazwi omthandazo presbyter Armenia, awusona inkantolo unjust LabeZizwe, kodwa uqede ngokushesha avele ngaphambi Court of Justice we uMdali wezulu nomhlaba. Wacela sinikeziwe amandla kubo bonke labo, njengaye, ufuna usizi lwakhe futhi ukufa ukukhazimulisa igama leNkosi.
Amazwi akhe sekuzwakala, futhi njengoba ubufakazi wehlela phezu kwabo emseni kaNkulunkulu, wazizwa kuqubule isibindi ezinhliziyweni zabo Yevstratii futhi Eugene. UMoya oNgcwele labasibekela futhi wanginika amandla engeziwe, ngenhla okuyinto kukhona lutho kuleli zwe okonakalayo. Of ingakwazi ebumnyameni etilongweni, baqala indlela yabo eya ekuphileni okungapheliko.
Isivivinyo Akanabo Ubulungisa abeZizwe ngonya
Ngosuku olulandelayo, ebukhoneni elite ezisemadolobheni lonke futhi izikhulu zempi ombusi yasebukhosini futhi umbusi ophakeme emzini Fox waqala icala Auxentios umdala nababe naye. Lawa kwakungamadodana abantu, kanye noyise ongokomoya wenqaba ukushintshashintsha izimfundiso zaphezulu ekuphileni. Bonke balinde ngoba wayebona ukuthi usezokufa, kodwa Fox kuqala wazama ukwakha okungenani ezinye usesimweni ubulungiswa ngakhoke ababefuna ukuzwa umbono ababekhona.
inkulumo-Forensic Eustratius futhi Eugene
Ngokungangabazeki, wayekholelwa ukuthi lapho kuboshwa futhi bayolizwa amaKristu. Kodwa konke kwenzakala ehlukile. Okokuqala phambi kwakhe nabo bonke abasebenzi lasenkantolo livela Yevstratii njengoba ayala ibutho emzini, by isikhundla, ukuthi bekumele izwi lokuqala. Okwammangaza kakhulu umbusi, akukhona nje kuphela ukuthi waphakamisa ukuhlambalaza ebekwa icala, kodwa, futhi uhamba amazwi akhe agumenti ekholisa, wakwazi ukuba asho inkulumo brilliant ezivikela ubuKristu, futhi ekugcineni ngokukhululekile nangomoya esememezela ngesibindi ukuthi babezolalela lezi zimfundiso.
Washaya wezwa, Fox ngokoqobo amazwi, kodwa ngomzuzu olandelayo, esanguluka, waba sesimweni ukufutheka ngaphambilini strip ayizidlakela induna zonke iziqu zakhe kanye nezikhundla, futhi iningi babo bayafa. Awunayo isikhathi ngisho abakhona endaweni yesehlakalo ukubhekana ububanzi esiyesabayo njengoba kwavela Eugene phambili. Saint, sesinanela amazwi umngane wakhe Eustratius, imemezela ukuthi ubuKristu kuphela inkolo yeqiniso futhi kuyiqiniso, njengoba ngokwayo wavuma umlandeli. Akubuzwa, ukuthi intukuthelo umbusi amshaya force okugcwele. Eugene lapha iboshwe futhi ayiswe ukuthi jele, lapho usuku ngaphambi kokuba, lomngani wakhe wase saint ukuthandaza Auxentius.
Indlela kusayithi ukubulawa
Ekuseni ngovivi balethwa aphume amasango inqaba, egumbini yayiqukethe AmaKristu enqaba, ngisho ngaphansi nesijeziso sokufa ngabakhonza izithombe, futhi kwaholela edolobheni Nikopol, lapho isijeziso livelile ngaphambi izixuku ezinkulu. Indlela yale udwendwe edabukisayo badabula Aravrakin - umuzana okuhlala yicala labangane. Lapha basuke kahle futhi bethandwa ngenxa yomusa walo futhi esintwini.
Lapho Yevstratii futhi Eugene, eguqa ngaphansi amagalelo ka ngeziswebhu kwababonisi, badabula ezitaladini, abaningi esixukwini sabantu ngiyazazi, kodwa hhayi ukukhombisa, funa yokujeziswa enkingeni. Okuwukuphela wayeyindoda nesibindi futhi enesibindi okuthiwa Mardary. Wabuye zizibiza ngamaKristu, futhi wehluleka awubheki emaketangeni nabafowabo okholweni.
Ukusho goodbye kuya nomndeni uphathisa ukunakekelwa omakhelwane bakhe abangcwele - umKristu imfihlo, yena ngokuzithandela balandela abafowabo kuKristu. Edolobheni Nikopol, ngemva nokubekezela, bamukela ukufa. Njengoba isikhathi sasiqhubeka, base abagcotshwa kanye namuhla eyaziwa ngokuthi osanta Orthodox. ISonto Lobu-Orthodox ihlonipha inkumbulo yabo. Usuku St Eugene nalabo abahlupheka naye ngenxa yokholo lwabo, igujwa minyaka yonke ngo-December 26 ekhalendeni likaGregory.
Imemori ye umfel 'ukholo ongcwele
Namuhla e-Russia phakathi bonke abangcwele zikaNkulunkulu eziye bachitha isikhathi sabo esiningi inkonzo kweNkosi yomhlaba, ngendlela enesizotha futhi ohlonishwa umfel 'ukholo ongcwele Eugene. Ngo Novosibirsk, lapho Arhistratiga Mihaila Cathedral izenzo wezindela igama layo. Edolobheni elifanayo, ibandla St Eugene lavulwa ngo-1995. Yakhelwe eduze Zaeltsovsky emathuneni, lapho kubhekwa omunye amahle kakhulu e Novosibirsk.
umsebenzi wokwakha ngumlobi kwalesi sikhungo elingokomoya wezakhiwo I. I. Rudenko, owawusekelwe izinkondlo zakhe ucacisa zakudala Orthodox waseRussia. Itempeli isimo sezindela Pokrovsky Monastery (p. Zavyalovo), omunye abavikela wasezulwini iyona St Eugene. Icon kuthatha zanda isonto sezindela.
martyr oNgcwele, asesabi obala bayavuma ngumahluleli ongalungile emkhulu njengomKristu futhi izwé salokhu kokuhlupheka nokufa, iza ukusiza bonke abaphendukela kuye ngokholo nangethemba. Umthandazo St Eugene zisiza abantu kuzo zonke izinkathazo zokuphila, kungakhathaliseki ufuna ukusiza umuntu wathola Ubhapathizo oNgcwele igama elifanayo njengoba eyingoduso noma ngenye indlela. Ngisho noma okokuqala bezothandazela phambi kwesithombe ongcwele, kuyozwakala, uma kuvela inhliziyo.